Ny fahasalamana aloha… | NewsMada
Ny fahasalamana aloha…
Par Taratra sur 29/04/2021
Ady fiady izao firongatry ny valanaretina Covid-19 andiany faharoa izao: maningotra sy manala aina, manimba sy manakorontana fiainana. Tsy misy tsy voadona sy mitondra takaitra amin’izao, saika ny sehatra rehetra: toekarena, sosialy, politika, kolontsaina; eny, ny ara-panahy aza noho ny fanakatonana fiangonana, ohatra: mety misy mikatona mbamin’ny fony ny an’ny sasany?
Izany rehetra izany, mila fijoroana sy fiaretana amin’izao ady izao. Mba tsy ho potika na ho ringana tanteraka izay sisa miangana. Tsy takona afenina ny fahavoazana amin’izao ady izao. Amin’ny maha ady azy: manimba zavatra, mandrava… Hatramin’izao, tsy mbola mahafa-bela ny fiantraikan’ny tamin’ny taon-dasa, nefa tsy maintsy atrehina koa ny amin’izao, tsy azo odian-tsy hita.
Amin’izany, mba tsy hahalalina sy hampaharitra ny ady mbamin’ny fahavoazana aterany, tsy misy afa-tsy ny manafaingana ny ady no atao. Ao anatin’ny fahatoniana fa tsy fikoropahana: izay mandeha miadana no azo antoka fa ho lasa lavitra sy tonga. Mila firaisankina izany, fifampitsinjovana, fifampitokisana… Iombonana ny fahavalo, tsy hita maso, tsy mifidy na manavaka olona…
Ny fanajana manontolo sy amin’ny antsipiriany ny fepetra fakanana ny fihanaky ny valanaretina aloha no ahombiazana. Tsy am-boalohany ihany izany, na rehefa misy fanentanana na fampitandremana na fanasaziana. Mba tena faharesen-dahatra sy fijerena lavitra… Ny tandrevaka sy ny zara fa manao no tsy mahalavorary sy mahaela izay atao, hahasasatra ny miarina.
Raha tiana ny hiverenana malaky amin’ny fiainana andavanandro, tsy aleo atao laharam-pahamehana aloha ny ady? Izany hoe ao anatin’ny hamehana izany: atao ambonin-javatra fa tsy ambanin-javatra na ambin-javatra. Avy eo, miady sy mitady izay lafiny toekarena, sosialy, politika; eny, na mirazotra amin’izay atao mandrakariva aza ny adim-piainana andavanandro, ny fitadiavana…
Tsy ny fahasalamana ihany ve no hoe voalohan-karena? Iaraha-miatrika fa tsy hampisaraka, ifantohana fa tsy hifampiandrasana, ifampitokisana fa tsy hifanomezan-tsiny…